विश्वकप हारमा “मेस्सीले सर्बाधिक पिडा भोगे” !! अबको कोपा अमेरिका र विश्वकप २०२२ जित्ने यस्तो योजना बन्दै !! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, अशोज २३, २०७५
बार्सिलोनाका स्ट्राइकर एवंम अर्जेन्टिनी स्टार लिओनल मेस्सी अन्य अर्जेन्टिनाका खेलाडी भन्दा निकै स्तब्द देखिए र उनको राष्ट्रिय कोच यस बिषयमा सहमति देखाउछन।
लिओनल मेस्सीमा आएको शान्त भावना विश्वकप २०१८ले गर्दा भएको हो भन्छन जोर्ज साम्पौली, असाधारण हार व्यहोरेको अर्जेन्टिनामा क्याप्टेन लिओनल मेस्सीमा निकै ठुलो ढक्का लागेको छ।
समूह चरणको निकै कस्टको साथ नाइजेरिया माथि विजय पाउदै अन्तिम १६मा पुगेको अर्जेन्टिना विश्वकप बिजेता फ्रान्सको सामना गर्न पुग्यो जसमा अर्जेन्टिना ४-३ गोल अन्तरले पराजय भयो। उक्त खेल अगाबै साम्पौलीलाई टिमको म्यानेज कार्यबाट बर्खास्त गरिएको थियो र टोलिलाई लिओनल मेस्सीले सम्हालेका थिए, तर पनि अन्तिम १६ माथि बढ्न सकेन। मेस्सीलाई उक्त हारले निकै ठुलो चोट दिनुको साथै निकै स्तब्द तुल्यायो – सम्पौली भन्छन।
साम्पौली कोचबाट निस्किदै गर्दा भने – क्याप्टेनको हैसेतमा मेस्सी निकै अब्बल छन् र उनको संगर्षले टिमलाई केहि लक्ष्यमा लाग्ने छ! तर अर्जेन्टिनाको हारमा मेस्सी जति कोइ स्तब्द छैन उनि थप्छन।
सबै भन्दा ठुलो टुर्नामेन्टमा भएको अप्रत्यसित हारले टिम, समर्थक साथै पूर्ण लिओ समर्थकलाई नै ठुलो ठेस दिलायो तर उक्त हारले मेस्सीलाई दिएको चोट भुल्न भने गाह्रो सहज छैन। संसारले मानेको र संसारको सुन्दर खेल बोकेको अर्जेन्टिनाले हरेक दिनको संगर्षलाई नियाल्दै छ, हार र जित खेलमा हुने नै हो एक दिन फेरी जितको मुल्यांकनमा हुने आशामा टिम बसेको छ।
मेस्सी जस्तो खेलाडी टिममा रहदा हार र गल्तिको त कल्पना हुदैन तर त्यो हार जाएज छैन, हामी सबैले अपनाएको कुरा हो त्यो। विश्वकप मार्फत बार्सिलोनाबाट खेल खेलीरहेका लिओनल मेस्सी देशको खेलमा म्यानेजरको मौकाबाट बन्चित भएका छन् साथै साक्लोनी टिमलाई समाल्दै छन् – साम्पौली बताउछन।
तर धेरै खेलाडी र विभिन्न कोचका अनुसार उनि अर्को विश्वकप २०२२मा समेत देखिने दाबी गरेका छन् र साथै टाइटल जित्ने सम्मको दाबी गरेका छन्। गल्ति सुधारे त्यो सम्भब भएको बुझिन्छ।
केहि समयमा साउदी अरबसंग मैत्रीपूर्ण खेलमा अर्जेन्टिना भाग लिदै छ र कोपा अमेरिकाको जित सफल भए विश्वकप २०२२को सम्भावना बढ्ने पनि दाबी गरिएको छ।